Maxkamadda ciidamada oo xukunno kala duwan ku ridday askar | KEYDMEDIA ONLINE
Maxkamadda ciidamada oo xukunno kala duwan ku ridday askar
Maxkamadda ciidamadamada qalabka sidda ayaa ufariisatay dhageysiga dacwad lagu soo oogay ciidan ka tirsan kuwa dowladda kuwaasoo loo haysto dacwado kala duwan.
DOOLOOW, Soomaaliya - Maxkamada Darajada Kowaad ee Ciidamada Qalabka Sidda Qeybta 27-aad ayaa u fariisatay, dhageysiga dacwad loo heysto saddex eedeysane oo ka tirsan Ciidamada Dowlada Soomaaliya, kuwaas oo loo kala heysto, dil, isticmaalka Mandooriye, Amardiido, ka tagida Goob Shaqo, iyo rasaaseyn dad shacab ah.
Dhageysiga Maxkamadda ayaa mid ka mid ah saddexda eedeysane oo loo heystay in uu dil geystay ayaa dib loo dhigay go’aanka maxkamadda, labada Askari ee kale oo loo heystay isticmaalka maandooriyayaal, amar diiddo, iyo rasaaseyn dad shacab ah ayaa lagu kala xukumay, 3 ilaa lix bilood oo xabsi ciidan ah.
Goobta ay maxkamadeyntu ka socotay waxaa ku sugnaa maamulka heer gobol iyo heer dagmo, saraakiisha ciidamada qeybahooda kala duwan iyo ehellada eedeysanayaasha.
Inta badan maxkamadda ciidamada qalabka sidda ayaa la keenaa kiisas sidan oo kale loo haysto ciidamo ka tirsan kuwa qalabka sida ee Soomaaliya, kuwaasoo dhibaateya dadka shacabka ah islamarkaana aad u isticmaala maandooriyaha.